Kooxda Arsenal Oo Si Xarago Leh U Garaacday Chelsea – somalilandtoday.com
Kooxda Arsenal Oo Si Xarago Leh U Garaacday Chelsea
(SLT-London)Arsenal ayaa guul dahabi ah garoonkeeda Emirates Stadium kaga gaadhay kooxda ay magaalada London ka wada dhisan yihiin ee Chelsea waxaana Gunners guushan muhiimka ah ku hogaamiyay Lacazette iyo Laurent Koscielny oo qaybtii hore ee kulankan min hal gool dhaliyay.
Arsenal ayaa tubta guusha ku soo laabatay waxayna ka soo kabsatay guuldaradii West Ham ka soo gaadhay todobaadkii hore iyada oo Gunners sare u soo qaaday rajadeeda kaalinta afraad ee Premier league. Arsenal ayaa yeelatay 44 dhibcood waxayna wali isku dhibco yihiin Man United oo iyaduna guul ka gaadhay Brighton.
Laakiin Manchester United ayaa sidoo kale faa’iido ka heshay guusha ay Arsenal gaadhay maadaama oo ay saddex dhibcood oo kaliya ku soo koobtay farqiga dhibcaha ee ay kaalinta afraad u jirto waxayna hadda si buuxda u muuqataa in Man United, Chelsea iyo Arsenal ay noqdeen saddex kooxood oo kaalinta afraad si waali ah ugu dagaalami doona.
Arsenal ayaa hadda heshay guul ay kalsoonida kooxdeeda dib ugu soo celin karto iyada oo waliba saddex dhibcood oo kaliya u soo jirsatay Chelsea oo kaalinta afraad ku jirta waxayna Gunners heshay fursad ay dagaalka kooxdeeda ee kaalmaha sare ku sii xoojisay.
SHIXIHII LABADA KOOXOOD EE KKULANKAN:
KAYDKA: Ross Barkley, Willy Caballero, Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi, Andreas Christensen, Emerson, Ethan Ampadu.
KAYDKA: Petr Cech, Mohamed Elneny, Mesut Ozil, Ainsley Maitland-Niles, Alex Iwobi, Nacho Monreal, Shkodran Mustafi.
Arsenal ayaa heshay goolkeeda furitaanka ee dhibaatada wayn ku noqday Chelsea kadib markii uu Lacazette awooday in uu dhamaystiray kubbad caawin uu ka helay difaaca midig ee Hector Bellerin wuxuuna Lacazette ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Gunners si qurux badan ciyaarta ugu bilaabtay.
Laakiin Chelsea ayaa isku dayday in ay jawaab ka bixiso goolka looga naxsaday balse waxaa hor taagnayd koox si buuxda ugu soo diyaar garowday in ay saddexda dhibcood ee kulankan ku hesho garoonkeeda isla markaana dagaal xoogan ku jirtay.
Daqiiqadii 39 aad Arsenal ayaa jamaahiirta kooxdeeda Emirates Stadium qaab qiiro ah ku riday kadib markii uu difaaca dhexe ee Koscielny uu awooday in uu dhaliyo goolka Blues wadnaha sii gooyay ee labaad waxaana caawinta goolkan sameeyay Sokratis waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Arsenal ku heshay goolka labaad ee kalsoonida.
Chelsea ayaan qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigin Emarites Stadium qaybtii hore ee kulankan laakiin daqiiqadii 45 aad Blues ayaa ugu dhawaatay in ay shaqa Gunners gaadho kadib markii uu Marcos Alonso birta u garaacay Arsenal waxayna kooxda Sarri la kulantay nasiib daro ay iskaga soo yarayn kartay goolasha laga dhaliyay.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid u socotay qaabkii uu Unai Emery ka doonayay iyada oo qaybtii hore lagu kala nastay 2-0 ay Arsenal hogaanka ciyaarta ku haysay isla markaana uu Blues culayska ugu wayni saarnaa in ay soo laabto.
Daqiiqadii 63 aad ee qaybtii labaad ee ciyaarta markii ay Chelsea wax horumar ah samayn wayday ayuu Sarri ciyaarta soo galiyay Ross Barkley isaga oo saaray M. Kovačić laakiin Arsenal ayaa wali ahayd kooxda sida xoogan u joojinaysay weerarka Blues ee soo laabashada ugu hawl jiray.
Laakiin daqiiqadii 68 aad Emery ayaa shaxdiisa laba isbadal oo isku mar ah sameeyay wuxuuna ciyaarta ka saaray Lacazette iyo Aaron Ramsey isaga oo kooxdiisa ku soo xoojiyay A. Maitland-Niles iyo Alex Iwobi waxayna ciyaartu sii ahayd qaabkii qaybtii hore lagu kala nastay ee ay Gunners labada gool hogaanka ku haysay.
Sarri ayaa isla waqtiga badalka Arsenal isna ciyaarta ku soo tuuray xidigii hore ee Arsenal ee Olivier Giroud si uu iskugu dayo in uu goolal ku raadiyo kooxdiisii hore ee Gunners waxaana la saaray Willian.
DAQIIQADII 72 aad Arsenal ayay musiibo dhaawac ahi soo gaadhay waxaana garoonka dhaawac culus looga dhex qaaday difaaca midig ee Hictor Bellerin waxaana ciyaarta la soo galiyay Mohamed Elneny. Arsenal ayaa baroosinka sii adkaysatay waxayna cadho ku abuurtay Chelsea oo garan la’ayd qaabkii ay shabaqa Leno ku gaadhi lahayd.
Tobankii daqiiqo ee ciyaart ugu danbeeyay Sarri ayaa da’yarka C. Hudson-Odoi ciyaarta soo galiyay wuxuuna saaray Pedro Rodriguez oo aan saamayntii looga bartay ciyaarta ku yeelan waxayna Gunners markan awoodeeda iskugu gaysay in ay natiijada ilaashato.
Wax walba oo ay Chelsea iskugu dayday in ay goolal keensato ayaa noqday fashil waxayna ugu danbayn ciyaartu ku dhamaatay 2-0 ay Arsenal ku garaacday kooxda Sarri iyada oo waliba Gunners saddex dhibcood u soo jirsatay kaalinta afraad ee Blues ku jirto.